Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Aviation » Maamulihii hore ee GE oo loo magacaabay maamulaha duulista hawada
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Dadka • Technology • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka
Dhawaanahan, Ms. Green waxa ay noqotay Madaxa Fulinta ee GE Capital Aviation Services (GECAS) Agabka Agabka, qaybiyaha ugu horeeya ee qalabka hawada iyo qaybta matoorka.
Unical Aviation Inc. ayaa maanta ku dhawaaqday inay Sharon Green u magacawday madaxa fulinta ee shirkadda, laga bilaabo 1-da Disembar.
Ms. Green waxa ay bedeli doontaa Agaasimaha Maamulka Sinaanta ee Platinum Dori Konig, oo u shaqaynaysa Unicalmaamulaha ku meel gaadhka ah. Platinum Equity waxay heshay Unical bishii Ogosto.
"Magacaabistan waa tallaabo kale oo muhiim ah oo ballan-qaad ah si loo maal-galiyo guusha Unical iyo in la sii xoojiyo booskeeda suuqa hawada ee caalamiga ah," ayuu yiri Mr. Konig. "Sharon waa hogaamiye la xaqiijiyay oo yaqaan warshadaha iyo macaamiisheeda, wuxuuna leeyahay rikoor gaar ah oo soo saarista natiijooyinka. Isku darka gaarka ah ee xirfadeeda maaraynta iyo khibradeeda qaybta ayaa ka dhigaya mid ku habboon Unicalcutubka xiga ee koritaanka."
Dhawaanahan, Ms. Green waxay noqotay Chief EMadaxa fulinta ee GE Capital Aviation Services (GECAS) Ganacsiga agabka, qaybiyaha koowaad ee qaab-dhismeedka hawada iyo qaybaha matoorka. Ms. Green waxa ay ku biirtay GE 2007dii waxa ayna sii wadatay in ay noqoto Madaxa Maaliyada iyo Madaxa Hawlgelinta GECAS. Waxay hore ugu soo shaqeysay Madaxa Maaliyadda ee Kooxda Memphis.
"Aad ayaan ugu faraxsanahay in aan ku biiro Unical wakhtiga xiisaha badan ee shirkadda iyo warshadaha," ayay tidhi Ms. Green. "Unical wuxuu leeyahay sumcad wanaagsan oo ay u qalmaan sida lammaane lagu kalsoon yahay ee macaamiisha duulista ee adduunka oo dhan. Iyada oo taraafikada rakaabka hawadu ay sii socoto dib u soo kabashada suuqa xamuulka hawaduna uu sii wado koritaanka, Unical waxay haysataa fursad aan caadi ahayn oo ay ku dhisto guusheeda oo ay ku gaadho heerar aad u sareeya.
Waxaa la aasaasay 1990 oo xarunteedu tahay Magaalada Warshadaha, CA, Unical Aviation Inc. waxay leedahay in ka badan 350 shaqaale waxayna siisaa qaybo diyaaradeed iyo qaybo ka badan 2,100 macaamiisha duulista ee adduunka oo dhan iyada oo loo marayo shabakad tas-hiilaad ah oo u go'ay Maraykanka, Yurub iyo Aasiya.
Iyada oo in ka badan 85 milyan oo qaybood iyo in ka badan 1.3 milyan oo hawo-hawo oo gaar ah iyo lambarrada qaybta matoorka ay ku jiraan, Unical waa mid ka mid ah alaab-qeybiyeyaasha ugu weyn ee alaabada cusub iyo kuwa la adeegsan karo ee warshadaha hawada caalamiga ah. Shirkaddu waxay ka soo xigataa, dib u xaqiijisaa oo dib u sii iibisaa qaybaha diyaaradda shirkadaha diyaaradaha ee ganacsiga, kuwa xamuulka qaada, kiraystayaasha diyaaradaha, iyo dayactirka duulista, dayactirka iyo dib u habeynta (MRO). Unical ayaa si toos ah ugu dhex milmay saldhigyadeeda dayactirka, taasoo bixisa faa'iido tartan leh oo leh adeeg suuqa oo degdeg ah.
Ms. Green waxa ay shahaadada koowaad ee xisaabaadka ka qaadatay Jaamacadda Mississippi iyo Master of Business Administration in Finance oo ay ka qaadatay jaamacadda Christian Brothers.